Waamicha MM Abiy Ahimad “Gara biyyaa gala” jedhu lammilee Ityoophiyaaf dhiyeessan qindeessuuf qophii ta’uu Manni Maree Diyaaspooraa Itiyoophiyaa beeksise. – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Waamicha MM Abiy Ahimad “Gara biyyaa gala” jedhu lammilee Ityoophiyaaf dhiyeessan qindeessuuf qophii ta’uu Manni Maree Diyaaspooraa Itiyoophiyaa beeksise.
On Dec 3, 2021 609
Finfinnee, Sadaasa 24, 2014 (FBC) – Waamicha MM Abiy Ahimad “Gara biyyaa gala” jedhu lammilee Ityoophiyaaf dhiyeessan qindeessuuf qophii ta’uu Manni Maree Diyaaspooraa Ityoophiyaa beeksiseera.
Muummeen Ministiraa FDRI Abiy Ahimad dhalattootaa fi lammiilee Ityoophiyaa akkasumas michuuwwaan ishee biyya alaa jiraniif gara biyyaasaanii dhufuun ayyaana Qillee akka kabajan waamicha dhiyeessuun isaani ni yaadatama.
Bara haaraa Faranjoota 2022 Ityoophiyaatti akka kabajaniif diyaaspooraa miiliyoonni tokko gara biyyaa akka galan waamicha taasifame deeggarun saganticha qindeessuuf qophii ta’uu Manni Maree Diyaaspooraa Ityoophiyaa beeksiseera.
Manni Maricha waamicha dhiyaate deeggarun hojirraa oolmaasaaf waliin hojjechuuf qophii ta’uu mirkaneesseera.
Diyaaspooraan gara biyyaa galuun indaastirii tuurizimii guddisuu fi ammayyeessuuf ashaaraa mataa isaa akka kaa’u gochuun murteessaa ta’uu Manni Marichaa ibseera.
Gareen shororkeessa ABUT humnoota alaa waliin qindaa’uun biyyattii diiguuf waraana bane qolachuu fi biyyatti bilisa baasuuf qabsoo taasifamu keessatti hirmaachuuf waamicha dhiyaate qindeessuuf qophii ta’uus himeera.
Balaa birmadummaa Ityoophiyaarratti aggaamame qolachuu fi nageenya mirkaneessuuf waamichaa Mootummaa fudhachuun diyaaspooraan gara biyyaasaatti akka galu waamicha dhiyeessaniiru.
Naannoo keessan eegaa!
Gara adda waraanaatti duulaa!
Raayyaa Ittisa Biyyaa deeggaraa!
Fuula Feesbuukii keenyan dabalata odeeffannoo waqtaawaa
Obbo Dammaqaan Ministira Alaa Siwiidin waliin mari’atan
Miseensonni Shanee 21 Aanaa Meettaa Walqixxeetti karaa nagaan harka laatan
Qorannoo biyyaalessaa dhimmoota bulchiinsa daangaa fi eenyummaa irratti mariin…
Komishiiniin Tuurizimii Oromiyaa waggoota shanan dhufanitti galii birrii Biiliyoona 5…
ABUT naannoo Afaariitti iddoolee weerare gadi lakkisee akka…
Manni Maree Ministirootaa walga’ii Ariifachiisaa 2ffaa…
Oromiyaatti hoggansi sadarkaan jiru guyyaa Wixataa, Roobii…
Manni Marichaa kaadhimamtoota komishinii mana maree…
Obbo Dammaqaan Ministira Alaa Siwiidin waliin…
Miseensonni Shanee 21 Aanaa Meettaa Walqixxeetti karaa…
Qorannoo biyyaalessaa dhimmoota bulchiinsa daangaa fi…
Oduu biyya keessaa11686